Infosmada | Fanafainganana ny ady amin’ny Coronavirus : natsangana ny « Brigade d’intervention rapide »
Publié le 31 Mars | 03:03
Mitohy ny fikarohana paikady hanafainganana ny ady sy ny asa, manoloana ny mety ho fihanaky ny Covid-19. Anisan’ny nivoitra tamin’ny resaderasaka nataon’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Andriantongarivo, omaly teny amin’ny CCO Ivato ny nananganana ny « Brigade d’intervention rapide ». Nambarany fa rafitra manokana hiditra an-tsehatra avy hatrany amin’ny tranga maika na hamehana momba ny « coronavirus » izy io. « Betsaka ireo fitarainana sy fimenomenomana tonga ao amin’ny antso an-telefaonina 914 isan’andro. Anisan’ny andraikitra raisin’ny borigady ny famaliana anatin’ny fotoana fohy izany. Tonga any amin’ny toerana avy hatrany izy ireo, midina ifotony », hoy izy.
Miasa amin’ny fotoana rehetra
Notsiahivin’ny minisitra tamin’izany fa maro ireo miantso mba hangataka hatao fitiliana na koa misy manavy ka miahiahy. Misy koa ireo miantso manoloana ny fahitana olona tokony hatoka-monina. Raisin’ny borigady an-tanana izany, indrindra ho an’ireo tranga tena maika sy ahiana. Nanteriny fa miasa amin’ny fotoana rehetra ity rafitra ity ary efa manana fiara manokana « ambulance medicalisée », amin’izany. Mitarika izany kosa ny manamboninahitra kolonely sy dokotera miaramila ary mpitsabo mpanampy. Niainga tamin’ny fivoriana niarahan’ny filoham-pirenena sy ny mpikamban’ny governemanta sasany ny nananganana ity borigady ity.
Nanaraka ny toromarika ireo haino aman-jery tsy miankina
Nitondran’ny minisitra fanazavana koa ny momba ireo olona 25 tokony ho natao fitiliana ary nanaovana antso tamin’ny haino aman-jery ny asabotsy teo. Nambarany fa efa namaly avokoa izy ireo. « Namaly 100% izy ireo », hoy izy. Momba ireo haino aman-jery miisa 9 tsy nandefa mivantana ny fandaharana iraisana momba ny coronavirus amin’ny TVM/RNM, nambarany fa efa nanaraka avokoa izy ireo rehefa nandefasana taratasy fampitandremana. « Manaraka akaiky hatrany ny minisitera », hoy izy.